अब बेकारी छैन बाहिर! स्तर 43 देखिन्छ intimidating तर यसको सबै ब्लफ, तपाईंलाई थाहा छ अघि आफ्नो सानो fishies सुरक्षित हुनेछ! दुई यहाँ उद्देश्य चार पाल्तु जनावर सुरक्षित छन् (माछा तपाईं प्राप्त सबै छन्) र एक न्यूनतम कमाउन 24 000 अंक, केक को peice! …यो राम्रो तरिकाले तपाईं आफ्नो रणनीति प्रयोग गर्नुहुन्छ भने छ, अन्यथा यो धेरै गंदा प्राप्त गर्न सक्छ!
छत माथि खोल्छ & थप ब्लक आइपुग्छन्!
अब तपाईं संग बोर्ड सुरु 30 धेरै सीमित बोर्ड जस्तै चाल र केवल तीन रंग र के देखिन्छ, भित्र बाहिर बाट काम. त्यसैले बायाँ काम आफ्नो नीलो मा यहाँ मामला मा, पहेंलो र त्यसपछि रातो, यी ब्लक सेट खाली तपाईं पर्याप्त अंक कमाउन गर्नुपर्छ (वा kudos) तपाईंको मीटर भर्न र firecracker स्पार्क अप गर्न (आह-हा क्षण!) र तपाईं बाटो बाहिर धातु बक्से तोड कसरी छ.
त्यसैले तपाईं चार Firecrackers सबै माथि र यी कमाउन सबैभन्दा कुशल तरिका ठूलो संयोजन हान्न छ आवश्यक हुनेछ, एक समयमा खाली नै रंग को अधिक ब्लक अन्ततः तपाईं अधिक अंक कमाउन हुनेछ. तपाईंले बोर्ड प्रयोगमा एक firecracker छ यसलाई आफ्नो माछा को एक अन्तर्गत बाहिर बक्स लिन. (तिनीहरू सबै तल जसरी देखि हुनुपर्छ एक धातु बक्स टाढा!)
यो स्तर मा धेरै छिटो जाने छैन वा तपाईंले आफैलाई चाल बाहिर चलिरहेको पाउन सक्छ. संकलन र उत्सव मा निस्केको फुट्छ भनेर केही रंग ब्लक माथि मिल्ने को अस्थायी sparkly तारा संग भर्नका लागि मीटर लागि एक सानो मिनेट लाग्न सक्छ के यन्त्र वा तपाईं यसलाई खेलिरहेका छन् कम्प्युटरमा निर्भर!…हाँ गम्भीर हामी राम्री हुनुहुन्छ प्राप्त…अब मलाई firecracker पहिले नै पारित!